Wasaaradda Waxbarashada XFS oo kormeereysa Iskuulada dalka – Radio Muqdisho
Wasaaradda Waxbarashada XFS oo kormeereysa Iskuulada dalka
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya,(XFS) mudane, C/raxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri ayaa maanta sheegay in Wasaaradda Waxbarashadu ay sameeyn doonto kormeer loogu kuur gelayo tayada Waxbarashada ilaa 2,000 (laba kun) oo iskuul.
Wasiirka ayaa tilmaamay in ujeedada kormeerkaan ay tahay sidii loo indha indhey lahaay tayada waxbarashada, si loo ogaado heerka ay gaarsiisantahay,isagoo sheegay in Wasaaradu ay wado sare u qaadida tayada tacliinta.
Kormeerkaan oo ah mid loogu kuurgelayo tayada Waxbarashada iskuulada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa bilaaban doona 25-bishaan waxaa uuna ku egyahay 10-ka bisha 12-aad ee sanadkaan,waxaana laga sameyn doonaa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka.
Wasaaradda Waxbarashada ayaa wado dadaallo sare loogu qaadayo tayada waxbarashada dalka,iyadoo wasaaradu ay ka hortegeyso in ardaydu ay ka boodaan fasalada qaar taas oo ay sheegtay in ay dalka dhibaato xoogan ku heyso.
Wax garadka Warsheekh oo Dowladda Federaalka iyo maamulka Hirshabeelle ka codsaday in wax laga qabto baahiyaha ka jira Degmada+Sawirro
Taliye ku xigeenka Boliiska Soomaaliyeed oo kormeeray Saldhigga Boliiska Gobolka Mudug